(tonga teto avy amin'ny Teny siriaka)
Ny fiteny siriaka dia isan'ny fiteny semitika ao Atsinanana Akaiky, ao amin'ny vondrom-piteny arameana. Efa nisy tamin'ny taonjato faha-12 tal. J.K. ny fiteny arameana ka nivoatra nandritra ny taonjato maro. Fitenim-paritry ny fiteny arameana ny fiteny siriaka, dia ilay fiteny arameanan'ny faritra Edesa. Nanjary fiteny soratana ny fiteny siriaka tamin'ny fiantombohan'ny kristianisma tamin'ny fampiasana ny abidy siriaka. Ny fiteny siriaka dia atao hoe ܣܘܪܝܝܐ / Suryāyā na Suryoyo amin'io fiteny io. Amin'ny teny siriaka dia atao hoe ܐܪܡܝܐ / Armāyā na Ārāmāyā na Oromoyo ny fiteny arameana.
2 Tantaran'ny fiteny siriaka
3 Ny fiteny siriakan'ny mpanoratra
Amin'izao taonjato faha-21 izao dia tenenin'ny olona miisa 400 000 any ho any ny fiteny siriaka izay miparitaka amin'ny toerana samihafa, nefa ny tena ahitana azy dia ao atsimo-atsinanan'i Torkia sy ao avaratr'i Iràka. Misy vahoaka vitsy anisa ao Libàna, Siria, Iràna, Armenia, Jeorjia ary Azerbaijàna izay miteny fitenim-paritra siriaka iharan'ny fiteny eo an-toerana.
Tamin'ny taonjato faha-20 dia nipoitra ireo firehan-kevitra manindrahindra firenena izay tsy mahalefitra ny hafa indraindray ka nisy fiantraikany tamin'ny vahoaka miteny siriaka izany. Nampihemotra ny fampiasana ny fiteny siriaka ny fisian'ny olana ara-politika sy ara-pivavahana fahita ao Atsinanana Akaiky. Ny fifindrà-monin'ny Kristiana miteny siriaka dia niteraka fisiana vahoaka miteny siriaka any Amerika Avaratra sy Atsimo ary any Eoropa.
Tantaran'ny fiteny siriaka[hanova | hanova ny fango]
Tsy nanorina fanjakana tokana ny Arameana na dia efa nisy ny tanàna-fanjakana arameana sahala amin'ny an'i Damasy (na Damaskosy) sy Hamata (na Hama ao Siria) ary Arpada. Ny fielezan'ny fiteny arameana dia vokatry ny naha fiteny ofisialy azy tao amin'ny Fanjakana asiriana sy ny Fanjakana babiloniana ary ny Fanjakana persiana, sady noho ny fanaovana sesitany Arameana sy vahoaka hafa resin'ny Fanjakana asiriana vaovao sy ny Fanjakana babiloniana vaovao. Ny malaza indrindra amin'izany dia ny Fahababoan'ny Jiosy tany Babilona.
Satria saika hita manerana ny Atsinana Akaiky ny olona miteny arameana sady moramora tamin'ny vahoaka miteny semitika ny nianatra io fiteny io, dia tonga fiteny ifandraisan'ny samy hafa firenena ny fiteny aramerana tao Atsinanana Akaiky, ka tamin'ny endrika mitovitovy izay fantatra amin'ny anarana hoe fiteny arameanam-panjakana (na arameana imperialy) izany. Resin'ny fiteny arameana tsikelikely ny fiteny semitika hafa toy ny fiteny hebreo (tamin'ny taonjato faha-6 tal. J.K. taorian'ny Fahababoan'ny Jiosy tany Babilona), ny fiteny fenisiana (taonjato voalohany) (mbola misy mpiteny anefa ny fenisiana any ivelan'ny tany Atsinanana Akaiky ka atao hoe fiteny ponika), ary tao Mesopotamia dia ny fiteny babiloniana sy asiriana (ary koa ireo fiteny tsy semitika toy ny fiteny horita).
Ny fiteny siriaka dia ilazana ny tenim-paritra arameana atsinanana izay tenenina ao Edesa. Avy amin'ny fiteny arameana tao avaratr'i Mesopotamia ny fiteny siriaka avaratra. Ny fivoaran'ny sampan'ny arameana dia azo fotorina noho ny fiantraikany tamin'ny arameanam-panjakana nanomboka tamin'ny taonjato faha-5 tal J.K. Taorian'ny nahazoan'i Aleksandra Lehibe an'i Siria sy Mesopotamia dia nanomboka nosoratana ny fiteny siriaka sy ny fitenim-paritra arameana hafa mba hiatrehana ny helenisma izay nanjaka tamin'izay. Nampiasaina ho fitenim-pifanakalozana ny fiteny arameana tamin'izay, na dia taorian'ny nampidirana ny fiteny grika aza. Ny fanjakan'i Osroena izay niorina tao Edesa tamin'ny taona 132 tal J.K. dia nanao an'io tenim-paritra arameana io (ny siriaka) ho fiteny ofisialy.
Ny fiteny siriakan'ny mpanoratra[hanova | hanova ny fango]
Nanomboka tamin'ny taonjato faha-3 dia lasa fitenin'ny Kristiana tao Edesa ny fiteny siriaka. Nadika tamin'ny fiteny siriaka ny Baiboly ka nahazoana ilay atao hoe Peshitta ary nisy literatiora betsaka hafa niforona koa. I Efrema Siriana, mpanoratra sy mpampianatry ny Fiangonana, no isan'ny olona nalaza tamin'izany fotoana izany. Maro ireo lahatsoratra amin'ny teny grika nadika tamin'ny fiteny siriaka (isan'ny nandika teny i Sergio Reshaina), nefa nisy koa ny asasoratra natao avy hatrany tamin'ny teny siriaka momba ny siansa, ny filozofia, ny teolojia, ny tantara ary ny fombam-pivavahana (litorjia), ary nisy ny fandikan-teny ny Baiboly na ny boky hafa. Ny fampiasan'ny maro ny Baiboly amin'ny fiteny siriaka (Peshitta) dia nahamora ny fielezan'io fiteny io niaraka tamin'ny kristianisma.
Tsy tena tenim-paritra ireo atao hoe fiteny siriaka tandrefana sy fiteny siriaka tatsinanana: ny fenitry ny fiteny siriakan'ny mpanoratra izay noraiketina nanomboka tamin'ny fandikana ny Baiboly amin'io teny io (ny Peshitta) (taonjato faha-2 sy faha-3) sy tamin'ny famoahana ny Toriteny nataon'i Efrema avy any Nisiba (taonjato faha-4). Ny fahasamihafana nisy teo amin'ny fiteny siriaka andrefana sy ny fiteny siriaka atsinanana nanomboka tamin'ny taonjato faha-6 (taorian'ny fihamafisan'ny fivakisan'ireo Fiangonana), ary nanomboka tamin'ny taonjato faha-8 fara-fahakeliny, dia azo heverina fa nanjary fitenin'ny manampahaizana io fiteny siriaka literera io, ka niavaka tamin'ny endrika hafan'ny fiteny arameana niara-nisy taminy (sahala amin'izay nitranga teo amin'ireo fiteny "romana" tamin'ny tapany voalohany amin'ny Andro Antenantenany). Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fiteny siriaka andrefana sy ny fiteny siriaka atsinanana dia azo ampitahaina amin'ny fahasamihafana nisy teo amin'ny fomba nitenenan'ny Fratsay sy ny Italiana ny fiteny latina fahizay.
Ny tena fahasamihafana lehibe dia momba ny fanononana ny zanatsoratra na zanapeo sasany: ny [ā] (na [a:])ao amin'ny fiteny siriaka iraisana dia voatahiry ao amin'ny fiteny siriaka atsinanana, nefa tononina hoe [o] ao amin'ny fiteny siriaka andrefana (ohatra, i Masindahy Efrema dia atao hoe Mār Aphrem ao amin'ireo Nestoriana, fa Mor Aphrem kosa ao amin'ireo Jakobita sy Maronita), ary vokatr'izany koa dia voatahirin'ny fiteny siriaka atsinanana ny fanavahana ny [o] sy ny [u] tao amin'ny fiteny siriaka iraisana nefa nafangaron'ny fiteny siriaka andrefana ho [u] fotsiny izany (indrindra amin'ny fanononana: amin'ny fanoratana dia soratana amin'ny alalan'ny wāw ireo zanapeo roa ireo nefa ny tandrefana, sahala amin'ny tatsinanana koa dia manavaka azy ireo amin'ny fampiasana teboka apetraka eo ambony ho an'ny fanononana hoe [o], ary teboka apetraka eo ambany ho an'ny fanononana hoe [u]). Afa-tsy izany dia misy fahasamihafana kely dia kely amin'ny fanononana teny sasany (ohatra: ny hoe "Tamin'ny voalohany" ao amin'ny fiantombohan'ny Bokin'ny Genesisy dia tononin'ny Nestoriana hoe [b-rāshit] fa ny tandrefana kosa manao hoe [b-reshit], nefa lahatsoratra mitovy ao amin'ny Peshitta no vakina).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_siriaka&oldid=972293"
Voaova farany tamin'ny 16 Jolay 2019 amin'ny 05:46 ity pejy ity.